समाचार Archives - Page 265 of 408 - Like For Nepal
Exclusive ज्ञानेन्द्र शाही माथी आ क्रमण गर्ने ५ जना मिडियामा? प्र हरीकै अगाडि माफी मागे ग ल्ती भयो माफ वास्तविकता बोले।
Exclusive ज्ञानेन्द्र शाही माथी आ क्रमण गर्ने ५ जना मिडियामा? प्र हरीकै अगाडि माफी मागे ग ल्ती भयो माफ वास्तविकता बोले। यो पनि पढ्नुहोस। छोटो समयमा सामाजिक संजाल टिकटक मार्फत सबै सामु चिनिन सफल भएकी सोनिया महत अहिले मिडिया मा आएकी छिन्। i am soni नामक टिकटक i’d मार्फत सबैको मन मुटु मा बस्न सफल भएकी सोनिया ले अझै आफ्नो प्रतिभा लाई सबै सामु पुर्याउने उदेस्यले उनि मिडिया मा आएकी हुन्। उमेरले जम्मा १५ बर्ष भएकी सोनियाले ९ कक्षा मा मात्रै पढ्छिन्। सानै उमेर देखि धेरै पढ्न रुचाउने सोनिया को डान्सर बन्ने लक्ष्य रहेको छ। टी भी हेर्दै नाच्न सिकेकी सोनियाले अहिले सबैलाई जित्न सक्ने क्षमाता रहेको छ। आफन्ती सबैले तेरो नाच धेरै राम्रो छ त भबिस्य नाच मै छ भने पछि उनि टिक टक मा आफु नाचेको भिडियोहरु हाल्न थालेकी हुन्। टिकटक मा नाचेको भिडियो हालेपछि धेरै दर्शकहरुले मन पराएको र धेरै राम्रो प्रतिक...
ठ्याक्कै !! फिल्मको काहानी जस्तै भयो ..न्युरो हस्पिटलमा आज के भयो हेर्नुहोस .पैसानै सबै रहेछ…!!
ठ्याक्कै !! फिल्मको काहानी जस्तै भयो ..न्युरो हस्पिटलमा आज के भयो हेर्नुहोस .पैसानै सबै रहेछ...!! यो पनि पढ्नुहोस। छोटो समयमा सामाजिक संजाल टिकटक मार्फत सबै सामु चिनिन सफल भएकी सोनिया महत अहिले मिडिया मा आएकी छिन्। i am soni नामक टिकटक i’d मार्फत सबैको मन मुटु मा बस्न सफल भएकी सोनिया ले अझै आफ्नो प्रतिभा लाई सबै सामु पुर्याउने उदेस्यले उनि मिडिया मा आएकी हुन्। उमेरले जम्मा १५ बर्ष भएकी सोनियाले ९ कक्षा मा मात्रै पढ्छिन्। सानै उमेर देखि धेरै पढ्न रुचाउने सोनिया को डान्सर बन्ने लक्ष्य रहेको छ। टी भी हेर्दै नाच्न सिकेकी सोनियाले अहिले सबैलाई जित्न सक्ने क्षमाता रहेको छ। आफन्ती सबैले तेरो नाच धेरै राम्रो छ त भबिस्य नाच मै छ भने पछि उनि टिक टक मा आफु नाचेको भिडियोहरु हाल्न थालेकी हुन्। टिकटक मा नाचेको भिडियो हालेपछि धेरै दर्शकहरुले मन पराएको र धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको हुदा उनलाई...
मनमोहन ह स्पिटल का ण्ड: जवाफ माग्दा मृ तकको बहिनि स मात्यो, नेहालाई अ स्पताल भित्रै यसरी मा#रेको रहेछ। यो पनि पढ्नुहोस। छोटो समयमा सामाजिक संजाल टिकटक मार्फत सबै सामु चिनिन सफल भएकी सोनिया महत अहिले मिडिया मा आएकी छिन्। i am soni नामक टिकटक i’d मार्फत सबैको मन मुटु मा बस्न सफल भएकी सोनिया ले अझै आफ्नो प्रतिभा लाई सबै सामु पुर्याउने उदेस्यले उनि मिडिया मा आएकी हुन्। उमेरले जम्मा १५ बर्ष भएकी सोनियाले ९ कक्षा मा मात्रै पढ्छिन्। सानै उमेर देखि धेरै पढ्न रुचाउने सोनिया को डान्सर बन्ने लक्ष्य रहेको छ। टी भी हेर्दै नाच्न सिकेकी सोनियाले अहिले सबैलाई जित्न सक्ने क्षमाता रहेको छ। आफन्ती सबैले तेरो नाच धेरै राम्रो छ त भबिस्य नाच मै छ भने पछि उनि टिक टक मा आफु नाचेको भिडियोहरु हाल्न थालेकी हुन्। टिकटक मा नाचेको भिडियो हालेपछि धेरै दर्शकहरुले मन पराएको र धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको हुदा...
घरमा पन्ध्र महिनादेखि अष्ट्रेलियामा छु भनेकी छोरीको काठमाडौंको सुन्धाराको हो टेलमा ला’श फेला परेपछि
घरमा पन्ध्र महिनादेखि अष्ट्रेलियामा छु भनेकी छोरीको काठमाडौंको सुन्धाराको होटेलमा ला’श फेला परेपछि कुनै घटना यस्तो फिल्मी शैलीमा भइरहेका छन् की वि’श्वास नै गर्न सकिन्न । काठमाण्डौँमा केहि दिन अगाडी यस्तै घटना भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सुन्धारामा रहेको होटल प्रे’सिडे’न्टमा एक महिलाको ला’श फेला पर्यो । तर घटना निक्क शं’कास्पद छ । विगत पन्ध्र महिनादेखि अस्ट्रेलियामा रहेको भनिएकी रजनी गुरुङको ला’श होटलमा भेटिएको हो ।होटलको को’ठामा रहेको शि’लि’ङ’मा उनी मृ’त अवस्थामा फेला परेकी हुन् । प्रहरीका अनुसार घ’टना निक्कै शं’कास्पद छ।रजनी गुरुङले विगत पन्ध्र महिनादेखि अस्ट्रेलियामा छु भनेर घर परिवारलाई जानकारी दिइरहेकी थिइन् । महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौका प्रवत्ता रमेश कुमार बस्नेतका अनुसार पोखरा घर भएकी उनी मृ’त अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले अनुशन्धान था’लेको छ । उनी मृ’त भन्ने थाहा पाएपछि ...
चौथो स्टेजको क्या न्सरसँग जुधिरहेका ५ वर्षका छोराले आमालाई सोधे, ममी हामी घर कहिले फर्किने ? गीताको थामिएन आँशु,
चौथो स्टेजको क्यान्सरसँग जुधिरहेका ५ वर्षका छोराले आमालाई सोधे, ममी हामी घर कहिले फर्किने ? गीताको थामिएन आँशु, काठमाडौँ । बन्दिथ जम्मा ५ वर्षका भए । उनलाई क्यान्सर भएको थाहा छैन । सन् २०२० को नोभेम्बरदेखि अस्पताल भर्ना भएका छोराले गम्भिर प्रकृतिको क्यान्सरसँग जुधेको टुलुटुलु हेरेकी आमा गिताले सम्झिइन्की भक्कानिन थाल्छिन् । गिताका आँखामा शाँसु भरिएको धेरै भयो । आमाका आँशु हेर्दै छोरा बन्दिथले भन्छन् ममी हामी घर फर्किने कहिले हो ?भारतको यो परिवार अहिले ठूलो समस्यामा परेको छ । एक मात्र छोरालाई चौथो चरणको क्यान्सबाट गुज्रीरहँदा आमा गिताले अब सर्वसाधारणले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै आफ्नो छोराले पुर्नजीवन पाउने भन्दै भक्कानिइन् । बन्दिथको उपचारका लागि कम्तिमा पनि २५ लाख लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ यो पनि पढ्नुहोस।पुर्व अधिकारजकुमार धिरेन्द्र शाहको कान्छी छोरी उशाना लैला ‘बबा’ शाहको चर्चा ने...
एक इन्च पनि भूमि कसैलाई अति’क्रमण गर्न दिँदैनौं : गृहमन्त्री अधिकारी नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले शनिवार हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको पनि निरीक्षण गरेका छन्। त्यस अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना, संरचना, राष्ट्र र नागरिकप्रतिको सुरक्षा जिम्मेवारी, परिचालन, निर्वाचन सुरक्षा योजना तथा रणनीति, विद्यमान सुरक्षा चुनौती, को’भिड–१९ महामारीमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिकाको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । गृह मन्त्री अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सीमा सुरक्षामा पु¥याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै राष्ट्र र नागरिकको सेवामा समर्पित हुन निर्देशन दिए । गृहमन्त्री अधिकारीले नेपालको भूमि अ’ति क्रमण अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) प्रधान कार्यालयको निरी’क्षणमा पुगेका मन्त्री अधिकारीले नेपाल सदियौं देखि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएको र त्यस...
स्वास्थ्यमन्त्री तामाङलाई काममा भ्याइनभ्याई, अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री लिन आफैँ पुगे विमानस्थल
स्वास्थ्यमन्त्री तामाङलाई काममा भ्याइनभ्याई, अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री लिन आफैँ पुगे विमानस्थल यो पनि पढ्नुहोस। हिले पछिल्लो समयका एकदमै चर्चीत पत्रकार, युटुबर, तथा समाजसेवी सन्तोश देउजाको जीवन निकै नै अनौठो तथा दु:खदायी रहेको छ । सानैदेखी निकै नै मेधावी छात्रमा गनिएका सन्तोश कक्षामा सधै प्रथम हुन्थे । वास्तवमा भन्ने हो भने उनले पढेको सायद घर परिवारका सदस्यले समेत थाहा पाउदैनथे । प्रायागरि सन्तोश घरका सबै सदस्य सुतेको बेला पढ्ने गर्थे। सानैदेखी चतुर्याइ स्वभावका सन्तोष दिनभरि बाहिर साथीहरुलाइ क्र्याम्बोर्डमा भुल्याउथे अनि आफुचाहि रातभरि पढ्थे । सन्तोशका बुबा नेपाल प्र,हरिको अवकासप्राप्त ब्यक्ति थिए । नेपाल प्रहरिको अवकाश पस्चात सन्तोशका बुबा छोराछोरीको भविश्यको लागी वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । भने उनकी आमा घरायसी काममै ब्यस्त रहन्थिन । जब सन्तोश कक्षामा भर्खर मात्र कक्षा ...
सबिता भण्डारीको घर अँगाडी ह”त्यारालाई फाँ”सीदे भन्दै भयो ल”फडा आज भयो एस्तो सम्म हेर्नुहोस्।
सबिता भण्डारीको घर अँगाडी ह"त्यारालाई फाँ"सीदे भन्दै भयो ल"फडा आज भयो एस्तो सम्म हेर्नुहोस्। यो पनि पढ्नुहोस। हिले पछिल्लो समयका एकदमै चर्चीत पत्रकार, युटुबर, तथा समाजसेवी सन्तोश देउजाको जीवन निकै नै अनौठो तथा दु:खदायी रहेको छ । सानैदेखी निकै नै मेधावी छात्रमा गनिएका सन्तोश कक्षामा सधै प्रथम हुन्थे । वास्तवमा भन्ने हो भने उनले पढेको सायद घर परिवारका सदस्यले समेत थाहा पाउदैनथे । प्रायागरि सन्तोश घरका सबै सदस्य सुतेको बेला पढ्ने गर्थे। सानैदेखी चतुर्याइ स्वभावका सन्तोष दिनभरि बाहिर साथीहरुलाइ क्र्याम्बोर्डमा भुल्याउथे अनि आफुचाहि रातभरि पढ्थे । सन्तोशका बुबा नेपाल प्र,हरिको अवकासप्राप्त ब्यक्ति थिए । नेपाल प्रहरिको अवकाश पस्चात सन्तोशका बुबा छोराछोरीको भविश्यको लागी वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । भने उनकी आमा घरायसी काममै ब्यस्त रहन्थिन । जब सन्तोश कक्षामा भर्खर मात्र कक्षा ८ मा ...
भर्खरै डा’क्टरले अ’स्पताल भित्रै मा”रे नेहालाई,मृ#तकको आफन्त र प्र’हरीको पर्यो ल”फडा,भेटियो नसोचेको प्रमण।
भर्खरै डा'क्टरले अ'स्पताल भित्रै मा"रे नेहालाई,मृ#तकको आफन्त र प्र'हरीको पर्यो ल"फडा,भेटियो नसोचेको प्रमण। यो पनि पढ्नुहोस। पछिल्लो समयमा सामाजिक संजाल टिकटक मार्फत चिनिएका सल्यानका सुन्दर मगर पहिलो पटक मिडियामा आएका छन्। सामान्य परिवारमा जन्मेका सुन्दरले आफ्नो प्रतिभा बाहिर ल्याउन सकेका थिएनन। पुर्खेउली घर पहाडमा भएको हुनाले उनि पढाईको शिलशिलामा नेपालजंग बस्ने गर्थे। बुबाआमाले छोरा छोरिको लागि धेरै दु’ख गरेर आफ्ना सन्तान लाई जसोतसो पढाएका थिए। सुन्दर घरको जेठो छोरा भएको हुनाले पनि केहि जिम्बेबारीहरु उनि माथि आउदै गरे। बुबाआमाको पनि उमेर जादै गर्यो। सुन्दरले भने अब मैले पनि केहि गर्नु पर्छ भनि ८००० हजारको तलबमा एक पोल्ट्री फर्म मा काम गर्न थाले। त्यहि काम बाट आएको पैसाले सुन्दर कोठा भाडा ,आफ्नो पढाई खर्च गर्न लागे। बर्षले २१ भएका सुन्दरको आफ्नो गीत गाउने कला बाहेक उनि पढाईमा पन...
निषेधाज्ञा थप्ने सरकारको निर्णय, यस्तोकारण देखाउँदै असारमा पनि काठमाडौंको उपत्याका नखोल्ने
निषेधाज्ञा थप्ने सरकारको निर्णय, यस्तोकारण देखाउँदै असारमा पनि काठमाडौंको उपत्याका नखोल्ने यो पनि पढ्नुहोस। पछिल्लो समयमा सामाजिक संजाल टिकटक मार्फत चिनिएका सल्यानका सुन्दर मगर पहिलो पटक मिडियामा आएका छन्। सामान्य परिवारमा जन्मेका सुन्दरले आफ्नो प्रतिभा बाहिर ल्याउन सकेका थिएनन। पुर्खेउली घर पहाडमा भएको हुनाले उनि पढाईको शिलशिलामा नेपालजंग बस्ने गर्थे। बुबाआमाले छोरा छोरिको लागि धेरै दु’ख गरेर आफ्ना सन्तान लाई जसोतसो पढाएका थिए। सुन्दर घरको जेठो छोरा भएको हुनाले पनि केहि जिम्बेबारीहरु उनि माथि आउदै गरे। बुबाआमाको पनि उमेर जादै गर्यो। सुन्दरले भने अब मैले पनि केहि गर्नु पर्छ भनि ८००० हजारको तलबमा एक पोल्ट्री फर्म मा काम गर्न थाले। त्यहि काम बाट आएको पैसाले सुन्दर कोठा भाडा ,आफ्नो पढाई खर्च गर्न लागे। बर्षले २१ भएका सुन्दरको आफ्नो गीत गाउने कला बाहेक उनि पढाईमा पनि त्यतिकै ट्यालेन...
Previous 1 … 264 265 266 … 408 Next